12 articles under Workplace Success
[Zawgyi] ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းသည္ နာမည္အသစ္တြင္တိုင္း ထြက္လာျခင္းမဟုတ္ ကြ်န္ေတာ္ အားကစားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသည္။ ၄င္းအားကစားသည္ ကၽြႏု္ပ္...
[Zawgyi] လုပ္ငန္းခြင္မွာ ကိုယ္ပိုင္သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ဘယ္လုိဖန္တီးမလဲ အလုပ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္မည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အား...
From Strangers to Team
[Zawgyi Version] သူစိမ္းမ်ား မွ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္လာေရး - အေျခအေနအဆင့္ဆင့္ အဖြဲ႕ တစ္ခု အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းဟာ အခ်ိန္ ယူရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္အဖြဲ႕အသစ...
Unicode Font ကောင်းတဲ့အကြံပြုချက်တွေဘယ်လိုပေးကြမလဲ? အခြေအနေ-အပြုအမူ-အကျိုးဆက် ဆိုတဲ့သော့ချက်သုံးခု သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုပေးဖို့ခက်ခဲနေတာကိုကြုံခဲဖူးလား။ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ရတာခက်ခဲနေတယ်လိ...
What kind of career can I build with accounting knowledge?
စာရင်းအင်းပညာနဲ့ ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင်ရည်မှန်းချက်တွေ ထားနိုင်မလဲ။ စာရင်းအင်းပညာဆိုတာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းမှာ လိုအပ်တဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုပါ။ စာရင်းအင်းပညာဆိုတာ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ငွေအသွင်းအထုတ်ကို မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ...
Private Equity Analyst တစ်ဦး၏ တစ်ရက်တာ Private equity ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကတော့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း တွေအပေါ် ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ (ဒါမှမဟုတ်) အသေးစား မြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်တဲ့ investment ကုမ္ပဏီ တွေကို ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြ...
What role should I consider to work in Banking and Finance sector?
Banking and Finance sector တွင် ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးကို ရွေးသင့်လဲ။ Banking ဆိုသည်မှာ bank မှ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှူများ (ချေးငွေ၊ သိမ်းငွေ၊ လွွှဲငွေ အစရှိ သည်များကို) ဝန်ဆောင်မှူပေးပါသည်။ Banking and Finance industry (B&FI) တွင် အသက်မ...
What are my career options in finance? (Part3of 3)
ငွေကြေးစီမံမှု နယ်ပယ်မှာ သင့်အတွက် ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနိုင်လဲ။ ဝယ်ယူခြင်း ဘက်ပိုင်းလုပ်ငန်း ဥပမာများ Private equity and venture capital - Private equity and venture capital firm များ သည် third party ရင်းနှီး မြှ ုပ...
What are my career options in finance? (Part2of 3)
ငွေကြေးစီမံမှု နယ်ပယ်မှာ သင့်အတွက် ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနိုင်လဲ။ အရောင်းပိုင်း လုပ်ငန်း ဥပမာများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဘဏ်များ - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ငွေကြေးရှိသူတွေ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ) နဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် ငွေက...
ငွေကြေးစီမံမှု နယ်ပယ်မှာ သင့်အတွက် ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနိုင်လဲ။ ငွေကြေးစီမံမှုနယ်ပယ်မှာ ငွေအရင်းအမြစ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ခန့်ခွဲ သုံးစွဲနိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊ အလေ့အကျင့်တွေက အဓိကပါပဲ။ လ...